Mandriva Mar kale ayey Musalafday Waxayna Balan Qaaday in ay Bulshadeeda ugu dhawaanayso | Laga soo bilaabo Linux
Mandriva waxay mar kale la dagaallameysaa musalafnimada waxayna ballanqaadday inay ku dhowaaneyso beesheeda
Perseus | | Qaybinta, GNU / Linux, Noticias
Laga soo bilaabo Linux wuxuu si dhow ula socday horumarka dhacdooyinka ku xeeran Mandriva iyo dhibaatooyinkiisa dhaqaale, xaqiiqda ah inaanan wax hore u daabicin iyo waqtiga ku habboonaynba waxay ahayd maxaa yeelay weli wax la taaban karo ma jirin weli (marka laga reebo xaqiiqada ah inuu hareer maray musalafnimada), laakiin Wali waxaa jiray shaki badan oo hawada kujira hadana hada waxbadan inbadan laga ogyahay mustaqbalkiisa, waxaan ka faaiidaysanay fursad aan ku bixinayno warka buuxa: D.
Abriil 12, 2012
Xayeysiis ayaa ka muuqda boggiisa rasmiga ah oo cinwaan looga dhigay: Waad salaaman tihiin, bulshada. Is maqal! Halkee, si kooban oo kooban iyo sida cinwaankeedu tilmaamayo, bulshada waxaa laga codsanayaa inay ku biiriyaan fikradaha, talooyinka iyo xitaa soo bandhigaan cabashooyinkooda la xiriira Mandriva, iyadoo la fiirinayo kulanka guud ee dhici doona 30-ka Abriil.
Abriil 30, 2012
Shirka guud ee Mandriva ayaa kulmaya si looga wada hadlo mustaqbalka qeybinta Franco-Brazil iyo dhamaadka maalinta, Agaasimaha Howlgallada Jean-Manuel Croset si kooban loogu wargaliyay Esta vez natiijada kulanka la yiri:
Shirka saamileyda guud ee Mandriva sifiican ayuu udhacay.
Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah, in dib loo cusboonaysiiyaa la ansixiyay laguna dhammayn doonaa 10 maalmood. Dib u eegista istiraatiijiyaddu waxay bilaabatay laba toddobaad ka hor waxayna ku dhammaan doontaa go'aamada u dhigma ee la qaato bartamaha Maajo.
Sidaad u aragto, fariintani ma ahan mid aad u cad, waxay kaliya xaqiijisay sii wadida qaybinta. Dhowr maalmood ka dib, bayaankan soo socda ayaa u muuqda: Bulshada Qaaliga ah - II, taas oo si fiican u sharraxaysa xaaladda:
Meey 2, 2012
Bulsho qaali ah, sidii balanku ahaa, waxaan halkan idinku soo gudbineynaa warbixin kooban oo ku saabsan wixii qabsoomay iyo halka aan u socono
Dhawaaqa bulshada waa mid aad u cajiiba. Mandriva Linux wali waxay heysataa taageerayaasheeda iyo kuwa raacsan, laakiin sidoo kale waxaan dareemay niyad jabkooda sanadihii la soo dhaafay macluumaad la'aana bilihii la soo dhaafay ayaa runtii ah qodob muhiim ah oo sharaxaya sababta inbadan oo idinka mid ah ay dareemayaan cidlo, iyadoo uusan qofna haynin. isteerinka. Tani waligeed may ahayn kiiska. Waxaan malaha soo marnay waqtiyadii ugu qalalaasaha badnaa ee Mandriva SA waligeed soo martay waana ku faraxsanahay inay tani dhammaatay waqtigan. Nasiib darrose, wuxuu awoodi waayey inuu wax kala xiriiro, maadaama ay khatar gelin karto mustaqbalkeenna. Tallaabooyinka lagu xallinayo dhibaatooyinka waxay runtii ahaayeen sida ku dul socodka ukunta, ogeysiis kasta waxay halis gelin kartaa nolosha mawduuca wadahadallada.
Xaaladda adag ee ina soo martay waxay leedahay sababo badan oo kala geddisan oo aan halkan lagu soo bandhigi karin lagumana shaacin doono, maaddaama qaarkood ay daboolayaan heshiisyo aan lala wareegin iyo kuwo la xiriira wixii la soo dhaafay oo sidaan wada ognahay, wixii la soo dhaafay aan la beddeli karin. Waajibaadkeygu waa inaan tixgeliyo wixii la soo dhaafay oo aan isku dayo inaanan khaladaad isku mid ah sameyn. Tani sinnaba maahan wax fudud, iyadoo la tixgelinayo inaan nahay shirkad ganacsi oo leh shaqaale mushahar qaata oo ku tiirsan howlaha nolol maalmeedka iyo saamileyda maalgaliya shirkadda ayaa doonaya inay arkaan natiijooyinka bil kasta. Sababta ugu weyn ee ay Mandriva SA si joogto ah dhibaatooyinka u haysato ayaa ah, waqtiyadii hore, xeerka aasaasiga ah ee dakhliga ee daboolaya kharashyada lama ixtiraamo. Tani waa inay isbedeshaa, waxaa jira qaabab lagu gaaro himiladan, laakiin waxay ka dhigan tahay inaan helno habab kale oo aan ku shaqeyn karno kuna dhiirrigelin karno alaabada fursadda u leh hadda suuqa.
Mashruuca Mandriva Linux wuxuu xaq u leeyahay inuu noqdo meel uu ku ballaadhi karo, iyo wada-hawlgalayaasha iyo taageerayaasha, oo ah meel ay ku soo bandhigaan kartidooda. Waxaan si sax ah uga shaqeyneynaa tan hadda iyo labada toddobaad ee soo socda. Waxaan ku dhawaaqi doonaa jihada aan dooneyno inaan ku qaadno mashruuca inta lagu jiro usbuuca seddexaad ee Maajo. Shaki kuma jiro inay adkaan doonto in la qanciyo dhamaan himilooyinka iyo himilooyinka, waxaa jira qaar badan oo qaarna aysan la jaan qaadi karin kuwa kale, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan gaarno waxa faa iidada u yeelan kara uguna rajada weyn bulshada iyo mashruuca Mandriva Linux. . La soco oo si xor ah u isticmaal cinwaanka emaylka bulshada@mandriva.com Dhanka kale. Waxaan wali dhageysaneynaa oo ka jawaabeynaa e-mayllada tirada badan ee la helay sidoo kale!
Tani waa sida ay wax yihiin ilaa maanta, oo ah war aad ufiican aduunka GNU / Linux iyo Mandriva lafteeda, maxaa yeelay wax waliba waxay muujinayaan inay dib uraaceen talaabooyinkoodii oo ay cagaha dhulka dhigeen iyagoo qaadanaya qiimaha saxda ah ee bulshada. , Bulsho qeybahan ka mid ah waa lafdhabarta mashruuc kasta, hadey leedahay ujeeddo ganacsi ama "bulsho". Hambalyo Mandriva SAWaxaan rajaynayaa in qaybintaadu ay ka soo ifbaxdo iftiinkeeda mar kale: D… Isla marka aan helno warar cusub oo ku saabsan jihada cusub ee Mandriva, ku kalsoonow inaan halkan kugu soo sheegi doonno;).
By the way, horay u soco oo wax u qor bulshada@mandriva.com si aan u muujiyo tabashooyinkooda ama talo soo jeedintooda, waxba ma waayi doonaan, waan sameeyay oo si naxariis leh ayuu Agaasimaha Hawlgalku u qaaday dhibaatada si uu uga jawaabo: D, taasi waa qodob weyn oo lagu xisaabtamo, ugu yaraan waxay ii oggolaatay inaan soo dejiyo wax yar oo XD ah . Haddii fikradaheena si dhab ah loo tixgeliyo waxay noqon laheyd ugu badnaan, ha aaminin;). Waa tan jawaabta e-maylkayga:
Waxaan jeclaan lahaa inaan si shaqsiyan ah uga jawaabo fariintaada waxaanan kuugu mahadnaqayaa ereyadaada dhiiri galinta ah, fikradaha iyo talooyinka ah ee aad si naxariis leh u bixisay. Tirada qeybinta ee aad isticmaashay runti waa wax cajiib ah! Waxaan si gaar ah ula socdaa talooyinkaaga iyo faalooyinkaaga ku saabsan qiimaha wax lagu qaybiyo. Waxaan doonayaa inaan galiyo dhammaan tamarta lagama maarmaanka ah si go'aannada loo gaaro inta lagu gudajiro Golaha Guud iyo Korjoogteynta ee Conseil ay u aadaan jihada saxda ah: iyadoo loo daneynayo bulshada Mandriva iyo isticmaaleyaasheeda.
Dhanka kale, waxaan jeclaan lahaa markale inaan kaaga mahadceliyo kaalmadaada wanaagsan iyo kalsoonida aad ku qabatay shaqadeena!
Xor ayaad u tahay inaad ila soo xiriirto talooyinkaaga iyo ra'yigaaga waqti kasta.
Sidaad u aragto, mid ka mid ah talooyinkeyga ayaa ahaa, waxyaabo kale (marka lagu daro muujinta intee in le'eg oo aan u isticmaalay XDD), in qiimaha xirmo koronto, si inbadan oo naga mid ahi ay marin ugu helaan: D, adiguna, maxaad soo jeedin ama codsiyo ah ayaad samayn lahayd?
source: Blog Mandriva
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Mandriva waxay mar kale la dagaallameysaa musalafnimada waxayna ballanqaadday inay ku dhowaaneyso beesheeda
Markii ugu horeysay ee aan arko 2007.
Dhab ahaan? Waxaan horeyba u nahay 2 markaa ^. ^
Perseus + Windows + WinVista? … O_O… waxaad u sheegi kartaa inaad hargab qabto… LOL !!
XD, waa waxa ay ahayd in looga jawaabo faallooyinka XDDD
Haa! Markii ugu horreysay ee aan la kulmo KDE3.5
Haa si aan u idhaahdo waxaan ku dhammaaday xoogaa jahwareer ah Mandriva 2007 maxaa yeelay ma aanan aqoonin sida loo isticmaalo KDE3.5, ma badbaadinin isbeddelada nacaladda leh. (taas oo waqtigaas aysan ogeyn inay ahayd KDE, Gnome, XFCE).
Sugitaanka warka mustaqbalka Mandriva 2012 keeni karo.
Saddex xD 😛
XD, wanaagsan, aan dhisno naadi markaa XD
4. Laakiin may ahayn 2007, haddii kale 2003 🙂
Ku jawaab annubis
Oh iyo Mandrake 9.2, maahan Mandriva 😛
Waxaan isku dayay in cabaar ah runtiina waan jeclahay, laakiin cusbooneysiintii ugu dambeysay, weligey ma heli karin wifi-kayga inuu shaqeeyo. haddii kale, halka muuqaal la mid ah lagu gaari karo shaqo, waxaan jeclahay miiska Mandriva.
Anigu sifiican uma aqaano Mandrivia maadaama aan cusub ahay, mandrivia waxay u isticmaashaa KDE sida caadiga ah? Hadday sidaas tahay, dhawaanahanba waxaan dhibaato ku qabay sabayon iyo KDE bluutuuka ma shaqeyn, bluedevil ma aqoonsan sidaa darteed waxaan gnome ku rakibay sabayon waxaanan u aqoonsaday sidii wax aan jirin , sidaa darteed dhibaatadu maaha mandrivia laakiin waa kde, salaan.
Ku jawaab Eder
Haa, KDE asal ahaan
Waa war weyn oo ku saabsan qaybinta weyn, waxaan la yaabanahay haddii qaar ka mid ah kuwii ugu wareegay Mageia hubin la'aan darteed ay dib u soo laaban doonaan.
Haddaad i weydiiso, waan jeclaan lahaa hadday mar kale midoobi karaan, Mandriva + Mageia + RosaLabs waxay noqon doontaa mid aan laga adkaan karin, waxaa mudan in lagu riyoodo XDDD.
Taasi waxay ka soo horjeedaa mabaadii'da GNU / Linux, maadaama ay ku xad gudbeyso xorriyadda kaamamka.
???? Aaway "xorriyadii ayaa lagu xadgudbay"? Dayaanna ¬
Waxay noqon laheyd mid fantastik ah, mana aheyn markii ugu horeysay ee aan wax arko, laakiin waxay aheyd tii igu xirtay dunidan Linux
Waxaan kuugu hambalyeynayaa Mandriva, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee la shaqeeya KDE sidaan maqlay 🙂
Ku jawaab elip89
Taasi waa sax, waa mid ka mid ah qaybinta oo siinaysa daryeel badan iyo isdhexgal wanaagsan kde 😉
By the way, horay u soco oo wax u qor bulshada@mandriva.com si aan u muujiyo welwelkaaga ama soo jeedimahaaga, waxba ha u lumin, waan sameeyay oo si naxariis leh ayuu Agaasimaha Hawlgalku u qaatay dhibaatada si aan uga jawaabo
Uff uma maleynayo inay fikrad fiican tahay in la yiraahdo waxa niyadeyda ku jira ...
Maxaad u isticmaashaa daaqadaha? OK, macno malahan
Weligay ma isticmaalin mandrake marka runta ma garanayo waxa aan uga jawaabo maqaalkan oo kale.
Waa maxay war wanaagsan.
Waxaan ku rakibey darawalka adag ee kumbuyuutarka martigaliye, hadda waxaan tan ugu isticmaalaa Windows-ka oo aan xitaa taydu ahayn.
Weligay ma garan taariikhda geesinimada leh ee ay waddo caan ah oo caan ah
Waxay ku jirtaa faallooyin badan, waa inaan sameeyaa manga-gaas 'XD'
haha in haa waan aqrin doonaa XD
Adigoon kaa xumaanayn saaxiibkay, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan waligeed fiicnayn in la qoro waxaad u malaynayso XDDDD, waxaad leedahay fikrado ka baxsan cabbirkan ¬.¬
Waan ka xumahay waxay ahayd mandriva, sifiican mandike ma u isticmaalin sidoo kale XD
Mandriva (Mandrake) waa astaan ​​sharaf ku leh adduunka Linux. Iyadoo lagu saleynayo wax ka baxsan Red Hat, waxay ahayd lambarka koowaad ee "adeegsade saaxiibtinimo" ka hor inta Ubuntu iyo Mark Shuttleworth aysan la imaan hantidooda weyn ee ay ku maalgeliyeen xayeysiinta weyn. Markii hore, qof kasta oo doonayay "deg deg iyo fudeyd" diniyeerka diniinka ah wuxuu raadinayay Mandriva (Mandrake). Natiijada sheekada Mandriva, in kasta oo nasiib darro tahay, haddana waa mid aad u qiimo badan, maadaama ay tusaale u tahay mashaariicda kale ee qaybinta Linux ee doonaya inay noqdaan mashaariic faa'iido dhaqaale leh (fikrad aad uga duwan tan "dhaqaale ahaan waara") sida Linux Mint. Maamulka mashaariicda softiweerku waa inay lahaadaan sharciyo cadcad oo aad u adag oo aan ka hor imaaneyn mabaadi'da falsafadeed ee mashruucu yeelan karo. Mustaqbalka mashaariicda qaybinta Linux waxay ogaan doonaan, iyadoo lagu saleynayo khibrada Mandriva, in xallinta khilaafaadka aan habbooneyn ay macno ahaan u dili karto mashruuca. Waqti badan ayey qaadan doontaa inta uu ka soo kabanayo Mandriva (Dhanka kale Mageia, oo ay weheliyaan kuwii hore ee soo saaray Mandriva, si tartiib tartiib ah ayey u sii xoogaysanayaan), laakiin waxaan ku kalsoonahay inuu soo kaban doono
Ku rakib Gimp 2.8 Imtixaanka Debian (Wheezy)
Yoda Kubadda Cagta: Loogu Talo Galay Soccer Lovers